5-ta Qaladaad ee ugu Sareeya ee kaa Hortagaya in aad Miisaanka Dhimato
Bogga horeCunto Caafimaadka
Qaladka 1. Ma raacaysid cabbirka qaybtaada
Dad badan ayaa aaminsan in haddii alaabtu caafimaad qabto, markaa waxaad cuni kartaa tiro aan xadidnayn. Tani waa qalad weyn. Xataa cuntooyinka caafimaadka qaba sida badarka, badarka oo dhan, baasto, ama miraha sokorta leh ee la cuno iyada oo aan la xaddidin waxay si fiican u dabooli karaan dadaalkaaga.
Sida loo hagaajiyo
Iibso miisaanka jikada oo miisaan dhammaan cuntooyinka aad isticmaasho.
Soo deji abka tirinta kaloriyada ama hay xusuus qor si aad ugu dhex jirto qaadashadaada maalinlaha ah.
Fadlan la soco in baakadaha iyo jaantusyada ay muujinayaan kalooriyada 100 garaam oo cunto ah oo aan la farsamayn, iyo miisaanka cunnada qalalan / ceeriin iyo la kariyey ay si weyn u kala duwanaan karaan. Sidaa darteed, ama miisaan cuntada ka hor intaadan karinin, ama ka raadi cunto diyaarsan oo ku jira miisaska kalooriga.
Khalad 2. Ha ku xisaabtamin waxa kaloriyada ku jira suugo
Dad badan oo miisaankoodu hoos u dhaco waxay u maleynayaan in qadar yar oo suugo ah uusan si weyn u kordhineynin kaloriinta saxanka. Dhab ahaantii, suugada ganacsiga ayaa inta badan aad u sarreeya kalooriyooyinka iyo dufanka: waxay ka kooban yihiin qiyaastii 30 garaam oo baruur ah iyo in ka badan 300 kilocalories 100 garaam. Markaad ku darto 30 garaam oo suugo saxan ah, waxaad isticmaashaa 90 kalori, kuwaas oo intooda badan ay yihiin dufan buuxa.
Ku beddel suugada dukaanka laga soo iibsado xawaashka dabiiciga ah. Sidan ayaad u yarayn kartaa kaloriyada cuntadaada adiga oo aan u hurin dhadhankooda.
Haddii aadan diidi karin suugada, ka gudub mabda'a shar yar: halkii aad ka heli lahayd ketchup, soo iibso yaanyada dabiiciga ah, oo ku beddel majones oo caano fadhi ah iyo maraqa khardal ah.
Qaladka 3. Waxaad doorbidaysaa cuntooyinka dufanku ku yar yahay
Caanaha dufanku ku yar yahay iyo caanaha khamiirka leh kaliya kuma caawinayaan inaad lumiso miisaanka, laakiin sidoo kale waxay kugu qasbaan inaad isticmaasho kalooriyo badan. Cilmi-baaristii dhowayd ee Hoose – Cuntooyinka Dufanku waxay kaa dhigi karaan kuwo buuran! by Food & Brand Lab waxay ogaatay in calaamada 0% ee dufanka ee baakadaha ay ku qasabto macaamiisha inay cunaan cunto badan oo ay helaan celcelis ahaan 84 kilocalories in ka badan cuntooyinka dufanka caadiga ah.
Intaa waxaa dheer, cuntooyinka dufanku ku yar yahay kuma siinayaan dareen dhereg, iyo fiitamiinadooda iyo macdanta ayaa si aad ah u nuugaya. Sidaa darteed, wax faa'iido ah ma helaysid oo wakhti yar ka dib waxaad gaajoonaysaa mar kale.
Iibso caanaha dufanka dhexdhexaadka ah.
Ma xisaabin kalooriyooyinka oo kaliya, laakiin sidoo kale borotiinka, baruurta iyo karbohaydraytyada.
Si taxadar leh u akhri calaamadaha: Qaar ka mid ah cuntooyinka dufanku ku yar yahay ayaa ku daray sonkor si ay u hagaajiyaan dhadhanka, taas oo kordhin karta kaloriyada.
Qalad 4. Ma jeceshahay cuntooyinka shiilan
Saliidda khudradda ee loo isticmaalo habka shiilan waxay si weyn u kordhisaa maadada kalooriga ee saxanka.
Isticmaal hababka kale ee karinta: ku dubi cuntada foornada, uumi.
Soo iibso digsi aan dhux lahayn oo kuu ogolaanaya inaad shiilto adigoon saliid ku darin.
Haddii aad saliid u isticmaasho shiilitaanka, ha ku shubin digsiga dhalada, laakiin dusha ku caday burush.
Qaladka 5. Waxaad cunaysaa nacnac badan oo caafimaad leh.
Badanaa waxaa lagula talinayaa in lagu beddelo macmacaanka iyo buskudka cunto fudud oo caafimaad leh sida lawska iyo miraha la qalajiyey. Haa, waxay ka kooban yihiin nafaqooyin aad uga badan, laakiin sidoo kale waxaa jira kalooriyo badan. Tusaale ahaan, cantoobo yar oo walnut ah oo miisaankeedu yahay 30 garaam ayaa ka kooban 196 kcal, iyo tiro isku mid ah oo timir ah, 80 kcal.
Ka saar saxanka miraha la qalajiyey iyo lawska meel caan ah.
Kahor intaadan qaadan cunto fudud oo caafimaad leh, qiyaas qayb, miisaan oo tiri kalooriyooyinka.
U beddel cunto caafimaad leh hana u oggolaan khaladaadka iyo khiyaaliga inay diidaan dhammaan dadaalkaaga.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 5-ta Qaladaad ee ugu Sareeya ee kaa Hortagaya in aad Miisaanka Dhimato!